क्रिसमस बलून फोरेस्ट 🥇 क्रिएटिव स्टप 🥇 🥇
क्रिसमस बलून फोरेस्ट
अघिल्लो खेल: तल झर्दै ..
तल झर्ने भ St्या youहरू तपाईंले सिँढी हलको सुन्नुभयो? यो दरबार बनाइएको [...]
अर्को खेल: दानव ट्रिपल ..
दानव ट्रिपल महजोंग एक राक्षस-थीमाधारित ट्रिपल महजोंग खेल। तपाईं केवल तीन [मेटा] मेटाउन सक्नुहुन्छ।
क्रिसमस बलून बर्स्टिंग नयाँ आर्केड खेल हो। यदि तपाईं आफ्नो हातको गतिमा धेरै विश्वस्त हुनुहुन्छ भने यस खेललाई नहेर्नुहोस्। तपाईंको कार्य भनेको सबै बलुनहरू क्रिसमस टोपीहरूको साथ पप गर्नु हो। यो ध्यान दिन लायक छ कि जुन वेगमा बेलुनहरू छिटो बाहिर देखा पर्दछ, त्यसैले तपाईँको गति पनि सुधार गर्नुपर्दछ। यो खेल विशेष गरी बच्चाहरूको लागि तयार पारिएको हो। आउँनुहोस् र हिउँ र हिउँको संसारमा खेलको आनन्दको आनन्द लिनुहोस्। यदि तपाईंलाई पनि यो खेल मनपर्दछ भने, यसलाई थप गर्न नबिर्सनुहोस् साथीहरूसँग साझा गर्नुहोस्!
# आर्केड# html5Androidबच्चाग्लोबोकौशलबरफमोबाइलक्रिसमसकोहिउँबच्चाबच्चाहरुउच्च अंकछुट्टिहरु